Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 28/12/2019)
Ọmụmaatụ, i nwere ike inwe mmasị na-eleta Paris na Amsterdam. Lelee ụzọ, na ị ga-ahụ na Brussels bụ a obodo dị n'etiti abụọ! site na nkweta obodo na jikọọ, ma ọ bụ ndị na-na na-n'etiti abụọ nrọ ebe, ị nwere ike nweta ihe mkpu maka gị Akon.
gastronomic utọ na n'ebe nile Europe. Ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na Europe na a mmefu ego, na smart na-eme bụ iji zere na-eri na ọnụ njem nleta ebe. Ekwela ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ego agbaji gị nri mmefu ego.
#mmefu ego #traveleurope mmefu ego cheaptravel savemoney